Barcelona oo dooneysa inay dib ugu laabato xiisaha xiddig horey bar-tilmaameed xoogan ugu ahaa – Gool FM
Dajiye October 9, 2019
(Barcelona) 09 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheeneysa in markale dib ugu laabato raacdada xiddig horey bar-tilmaameed ugu ahaa, si ay ugu xoojisato khadkeeda dhexe.
Xiddiga khadka dhexe ee reer France Adrien Rabiot ayaa ka fiirsanaya inuu ka tago kooxda Juventus kaddib bilihiisa ugu horeeyay uusan boos joogta ah ka helin qorshaha tababare Maurizio Sarri.
Adrien Rabiot ayaa Juventus kaga soo biiray kooxda Paris Saint-Germain, wuxuuna ku yimid beeca xurta ah, kaddib markii in muddo ah lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo naadiga reer Spain ee Barcelona.
Laakiin xiddiga reer France ayaa ku guuldareystay inuu boos ka helo qorshaha tababare Maurizio Sarri, wuxuuna ku soo bilaawday labo kulan oo kaliya kooxda Bianconeri dhamaan tartamada kala duwan.
Si kastaba ha noqotee, shabakada “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in 24 jirkan reer France uu ka fiirsanayo go’aanka uu kaga tagayo kooxda Juventus, isaga oo ka war qaba in Barcelona ay markale qorsheeneyso inay ku xoojisato khadkeeda dhexe.
Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in wakiilada Adrien Rabiot ay xiriir hoose oo aan rasmi aheyn la sameeyeen kooxda reer Catalonia ee Barcelona si ay uga wada hadlaan arrinta ku saabsan suurtogalnimada uu sida ugu dhakhsaha badan ugu dhaqaaqi karo garoonka Camp Nou.
Miralem Pjanić oo qiray riyadiisa ugu weyn uu doonayo inuu ku gaaro kooxda Juventus